स्थानीयद्वारा महानगर घेराउ | नेपाली पब्लिक स्थानीयद्वारा महानगर घेराउ | नेपाली पब्लिक
स्थानीयद्वारा महानगर घेराउ
admin २०७६, ३१ बैशाख मंगलवार १८:००
वीरगञ्ज – वीरगञ्ज –२१ परवानीपुरका करिब २ सय बासिन्दाले वीरगञ्ज महानगर घेराउ गरेका छन्। वडा कार्यालयले रेल्वेको जग्गाबाट घरटहरा हटाउने सूचना जारी गरेपछि आफूहरु बिचल्लीमा पर्ने भन्दै उनीहरुले महानगर घेराउ गरेका हुन्।
मेयर विजय सरावगीसँग न्यायको माग्दै महानगर घेराउ गरिएको परवानीपुरका इलियास मियाले बताए। पुरानो प्रहरी चौकी परवानीपुरभन्दा १ सय मिटर उत्तर तथा श्रीसिया खोलाभन्दा दक्षिणमा करिब १ सय २५ घरपरिवार रेल्वेको जग्गामा घर बनाई विगत ३० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्।
वडा नं. २१ का वडाध्यक्ष हबिब मियाले सरकारी जग्गामा भएको घरबस्ती खाली गर्न निर्देशनसहित सूचना गरेपछि बस्तीका स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्। २०४५ सालमा रेल्वे सेवा बन्द भएपछि बिस्तारै परवानीपुरका गरिब विपन्नहरुले रेल्वेको जग्गा कब्जा गर्दै बस्ती नै बसाएको वडाध्यक्ष हबिब मियाले बताए। रेल्वेको सोही सरकारी जग्गामा २० करोडको कृषि बजार स्थापना गर्ने सरकारको बजेट आएपछि बस्ती खाली गर्न पहल गरेको उनले बताए। उनले अर्काको सम्पत्तिको लागि जिद्धी नगरी शान्तिपुर्वक बस्ती खाली गर्न स्थानीयहरुसँग अपिल गरेका छन्।
सोही बस्तीका लक्ष्मणदेव पासवानले वडाध्यक्षले कृषि बजारको लागि २१ नं. वडा लिपनीविर्ताको विपश्यना तथा श्रीसिया खोला छेउमा रहेको ऐलानी जग्गामा कृषि बजार स्थापना गर्न अनुरोध गरे। ३० वर्षदेखि बस्दै आएको उक्त जग्गा छोड्न आफुहरु तयार नरहेको उनले बताए। यदि महानगर र वडा कार्यालयले बस्ती खाली गराउन बल प्रयोग गर्यो भने आफूहरुले पनि त्यसको जवाफ दिने उनीहरुको भनाइ छ।
वीरगञ्जका मेयर विजयकुमार सरावगीले संघीय सरकारको बजेटमा कृषि बजारको योजना आएकाले वस्ती खाली गर्नुको विकल्प नरहेको बताए। उनले अतिक्रमित जग्गा खाली गरी सरकारी काममा सहयोग गर्न आग्रह गरे।